भारतको अस्पतालबबाट नेपाली चिकित्सकको अनुरोध – भारतको जस्तो नेपालमा नहोस् !
अहिले भारतमा कतिपय बि’रामीहरु को’रोना पो’जेटिभ भएर बिरामी बेड नपाएर घरमै मृ’त्यु भएको छ। अस्पतालमा बेड पाउनेहरु पनि अ’क्सिजन नपाएर अस्पतालमै मृ’त्यु भएको अवस्था छ। कतिपयलाई आ’ईसीयू मिलेको छैन कतिपयलाई पाइप लाइन मिलेको छैन।
त्यसैले बि’रामीको अवस्था एकदमै नाजुक भएको छ। त्यसैले कोभिड १९ को सामु भारतले घुँ’डा टे’किसकेको अवस्था छ। भारतले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन त्यसैले अस्पतालमा बि’रामीहरुलाई अक्सि’जन दिन नसकेर डाक्टरहरु ला’चार भएका छन्। त्यसैकारण म मेरो अ’स्पतालमा पनि आ’इसीयूमा राख्न बेड छैन।
आ’ईसीयूको कुरै नगरौँ वार्डमा बेड छैन। बि’रामीलाई एउटा सि’लिण्डर दिन सकेको छैन। अ’क्सिजन नपाएर धेरै को’भिडका बि’रामीको मु’त्यु भइरहेको छ। मृ’त्यु भएको बि’रामीको दा’हसं’स्कार गर्ने घा’टमा ज’मिन नभएर २४
घण्टा ४८ घण्टादेखिका ला’सहरु बाहिर नै स’डेर बसेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दा नेपाली दाजुभाइहरु तपाँईहरु जहाँ हुनुहुन्छ सतर्क भएर ब’सिदिनु होला। र अर्को कुरा न’आत्तिकन तपाइँहरु जहाँ हुनुहुन्छ सोही स्थानमा सु’रक्षित भएर बसिदिनु होला यहाँबाट नेपाल गएर पिसिआर रिर्पोट लिएर जानुहुन्छ तर घर जान ३ दिन लाग्छ।
तर त्यो समयमा पनि को’भिड लाग्न सक्छ, तपाइँलाई लाग्यो भने परिवारलाई लाग्न सक्छ परिवारलाई लाग्यो भने स’मूदाय हुँदै सारा देशमा लाग्छ। अहिले नेपालको अवस्था एकदमै शान्त छ। त्यसैले नेपालमा भारत जस्तो परि’स्थिति भो’ग्न नपरोस्। भारत जस्तो परि’स्थिति निर्माण भयो भने नेपालले नियन्त्रण गर्न सक्दैन।
किनकी हाम्रो सानो देशमा आवश्यक ज’नश’क्ति छैन, गुणस्तरीय अस्पताल र औ’षधि छैन। भारतमा जति औ’षधि उत्पादन हुन्छ, जति अक्सि’जन ग्यास उत्पादन हुन्छ त्यति नेपालमा छैन। अहिले यो सं’क्रमणका’लीन परि’स्थितिमा कोरो’नासँग भारत झु’केको अवस्था छ।
त्यसैले नेपालमा यो खाले परिस्थति निर्माण भयो भने नि’यन्त्रणभन्दा बाहिर जान्छ। त्यसैले नेपाली जनताहरुले पनि यो बुझ्नु पर्छ कि भारत जस्तो भयो भने हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। र हामी पनि ला’चार हुन्छौँ। त्यसैले तपाइँहरु सतर्क र सुरक्षित रहनुहोला ।र म नेपाल सरकारलाई के आग्रह गर्छु भने चाँ’डोभन्दा चाँडो नेपालमा पनि ल’कडाउन गनुप’र्यो।
नेपालमा यो महिना विहे पार्टी चलिरहेको छ। यो सब बन्द गरेर कडाइका साथ सरकारले लकडाउन गर्नुपर्छ। अहिले भारतको अस्पतालहरुमा बि’रामी राख्ने बेडहरु कँहि पनि खाली छैन, बि’रामीहरुले बे’ड नपाएर दिनभर एम्बुलेन्समै घु’मेर साँझ एम्बु’लेन्समै मृ’त्यु भएको अवस्था छ।
यस्तो हुँदासम्म नेपालीहरुले किन बुझेका छैनन्? यसको मतलब यो हैन कि तपाइँहरु विहे नै नगर्नुहोस्, रमाइलो नगर्नुहोस् तर विहे गर्दा देखावटी नगर्नुस्। नेपालमा अहिले क्ष’णिक भाइरल हुन विभिन्न फोटो र भिडियो सु’ट गर्छन यो एकदमै ग’लत हो ।त्यसैले सबै नेपालीलाई भारतले भोगेको यो दु’र्घट_नाबाट पाठ सिक्न आग्रह गर्दछु।
त्यसैले नेपालमा यस्तो खाले अवस्था नआओस् भनेर सरकारसँग लकडाउन गर्न र नेपाली जनता सतर्क र संयमित हुन आग्रह गर्दछु। हजार दुई हजार संक्रमित भएपछि लक’डाउन गर्छु भन्ने सरकारको मनाशय छ भने नेपाल सरकारलाई चु’नौतीका साथ भन्छु त्यो निय’न्त्रण भन्दा बाहिर जानेछ।
र भारतमा भएका नेपाली दाजुभाइहरु पनि तपाइँहरु पहिलेको जस्तो हुनुहुन्न सबै शिक्षित हुनुहुन्छ, कुरा बुझ्नु हुन्छ। त्यसैले नेपाल नजानु जहाँ हुनुहुन्छ त्यँहि सुरक्षित भएर बस्नु होला, तपाइँ पोजेटिभ हुनुभयो भने परिवार, समाज र देश नै पो’जेटिभ हुनेछ ।
२०७८ बैशाख १६, बिहीबार ०५:५७ गते 1 Minute 1042 Views